nokia တွင် zawgyi font ထည့်သုံးချင်လို့ ပါ - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
nokia တွင် zawgyi font ထည့်သုံးချင်လို့ ပါ
Posted by Than Naing Tun on January 24, 2010 at 12:09pm in Zawgyi
မင်္ဂလာပါ Nokia smart phone မှာ အင်တာနက်ကြည့်တဲ့အခါ မြန်မာ ဇော်ဂျီဖောင့် ထည့်သုံးချင်ပါတယ် သိသောသူများ ပြောပေးကြပါ ခင်ဗျာ ........ Tags:
Permalink Reply by Cho Lay on February 18, 2010 at 9:15pm font router ကိုသုံးပြီး zawgyi-1 ကို install လုပ်လို့ရပါတယ်။ စာဖတ်ရတာတော့ သိပ်အဆင်မပြေလှသေးပါ။ လိုအပ်ရင် phone ကို hacking လုပ်ပါ။ လိုအပ်တဲ့ hacking software များကို dotsis.com, မှာ ရနိုင်ပါတယ်။ opda မှာ key, cer ဖိုင်၂ခုတောင်းပါ။ reg: လုပ်ပြီး ၄၈နာရီစောင့်ရပါတယ်။ ပြီးတော့ sign application တခုခု download လုပ်ပါ။ ပြီးရင် Hello OX ကို sign လုပ်ပါ။ ပြီးရင် install လုပ်ပါ။ font router ကို install လုပ်ပါ။ ပြီးရင် zawgyi-1.ttf ကို Phone ထဲကို ထည့်ပြီး font router နဲ့ install လုပ်ပါ။ ဖတ်လို့ရသင့်သလောက်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လုံးဝ ချောချောမောမော မဖြစ်သေးပါ။ ကိုဇော်ဂျီတို့ jar ဖိုင်တခုလောက်လုပ်ပေးရင်တော့ စာရေးလို့ပါ ရနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အခုကျနော်ပြောသလိုလုပ်မယ်ဆိုရင် မြန်မာလိုတော့ပေါ်ပါတယ်။ စာရေးလို့မရသေးပါ။ nokia 5800 နဲ့ N97 ဆိုရင်တော့ Symbian Myanmar ဆိုတဲ့ဖိုင်ကို google ထဲမှာ ရှာကြည့်လိုက်ပြီး Install လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်ထင်တာမမှားရင် application ကို sign လုပ်ဖို့တော့လိုမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ်ရင် nokia ဖုန်းကို ပဲ hack လုပ်လိုက်ပါခင်ဗျာ။ ကျနော်ရေးတာ အမှားပါခဲ့ရင် သိသောသူများ ပြင်ပေးစေလိုပါတယ်။
Permalink Reply by Than Naing Tun on February 19, 2010 at 12:03pm ကိုချိုလေး ခင်ဗျာ ....
အခုလို့ ရေးသားပေးတာကို သိရလို့ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ...တင်ပြပေးတာလေးကို ကြိုးစားပြီး လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါမယ် ....တင်ပြတောင်းဆိုမှု့ လေးကြောင်း အခုလို့ပြန်လည် ဖြေကြားပေးလို့ လည်း ညီအကို မောင်နှမများလည်း သိရှိရပါတယ် ...ကျေးဇူးပါ ကိုချိုလေး
Permalink Reply by Elthar on March 14, 2010 at 1:26pm ကျနော် myanmar engineer မှာဒါလေးတွေ့လို့
It perfectly run on nokia 5800 v40 unhackable phone.
End User License Agreement for SymbianMyanmar
This software is the first Myanmar application for nokia s60v5(eg.nokia 5800 xpressmusic,N97,5530,5230,x6 and other touch phone)This user license agreement (the AGREEMENT) is an agreement between you (individual or single entity) and me(Aung Naing Oo-The software creator) (the SOFTWARE) that is accompanying this AGREEMENT.You should not install this software unless you agree to the terms of that licence.
The SOFTWARE is the property of Aung Naing Oo-The software creator.This SOFTWARE is not sold, it is freeware.The FREE VERSION means an original fully working version of the SOFTWARE.
1. Install and use the SOFTWARE onasingle phone.
2. You can make many copies of the SymbianMyanmar software as you wish.
1. Decompile, disassemble,repack, reverse engineer or modify the SOFTWARE or any portion of it.
2. Copy the documentation accompanying the SOFTWARE.
Computer magazines are authorized to distribute SymbianMyanmar on journal pages,cover disk and CD-ROM. Please inform me by email-ano.andrews@gmail.com each time you distribute the software.
Created By Aung Naing Oo.....
Now I make SymbianMyanmar v3.0.It have Myanmar keyboard.Version 2.0 Fonts design is Like Iphone 3GS font design.SymbianMyanamar v3.0 will come around at 29th .3. 2010.
how to install SymbianMyanmar v2.0
1. Get your developer certificate first from OPDA(OR)Hack with Hellox.
2. Sign the SymbianMyanmar.sis and Edit SymbianMyanmar.sis
3. Install SymbianMynamar.sis